5 Ntinye Self Love nke izu - pisklak.net
5 Ntinye Self Love nke izu
Onye mmeri meriri ihe niile! Ogologo oge gara aga gbagọrọ Abba gụrụ abụ ndị a, mana anyị nwere ike iji ya dịka otu n’ime ụkpụrụ ndụ kachasị mkpa. Ọ bụrụ t even ugbu a ị na-ajụ onwe gị maka isi ihe a niile, anyị ga-agwa gị na ụlọ ọrụ cha cha bụ maka mmeri. Ọ bụla ọkpụkpọ na-aga na anyị mebere ụzọ na otu ihe unn’obi- ime ka a mmeri ma na-ntabi payout. Oke cha cha Crypto Oke bụ ebe kwesịrị ekwesị maka nke ahụ, ọkachasị mgbe ị mara ihe egwuregwu ndị kachasị akwụ ụgwọ ebe a. Na nke a, anyị na-ekpughe oghere 5 nke izu.
Chi nke Okike
Oghere that a sụgharịrị na Chinese”Tian Di Yuan Su” bụ egwuregwu nwere 5 reels, 30 paylines, na ugwo kachasị nke 50,000 ugboro nzọ kwa ahịrị. Ihe akara niile na-akwụ ụgwọn’aka ekpe gaan’aka nri, na-amalite website Id isi aka ekpe. Ọnwa dị ka ihe atụ gbasasịa ihe atụ na-akpali ma nwee ọtụtụ Sun Anụ ọhịa nke na-eme okpukpu abụọ mmeri gị niile. Onye ọkpụkpọ ahụ nwere ike ịdata na atọ ma ọ bụ karịa Ọnwa Mmụọ Mmụọ iji kpalite freebies. Sun Sun Wild aami-abịa t a 2x multiplier etinyere niile emerin’ịgwa na-agụnye a Wild. Nwekwara ike ịnweta nnwere onwe 15 website t ịdata atọ ma ọ bụ karịa Scattersn’oge atụmatụ ahụ.
Egwuregwu Cai Hong na-eme ka okpukpu ise, ahịrị atọ, na uru website Id 30 na-akwụ ụgwọ nkwụnye ụgwọ, nke na-akwụ ụgwọn’aka ekpe gaan’aka nri, malite nan’akụkụ aka ekpe. Atọ nke ụdị bụ opekempe maka ịkwụ ụgwọ ụgwọ. Egwurugwu that a ga-agbasasị ga-ebute atụmatụ ego ahụ ebe ị nwere ike imeri ihe ruru 33 Free Games na x15 multipliers. Akụkụ pụrụ iche nke oghere ahụ bụ mgbe onye ọkpụkpọ ahụ rutere atọ ma ọ bụ karịa Rainbow Scatters, ọ na – enweta 15 spins Id – enweghị self ọ bụla ma enwere ike ịmegharị ya karịa otu oge.
Mardi Gras Ime Anwansi
Otun’ime ọhụụ RTG kachasị ọhụrụ, oghere Mardi Gras Ime Anwansi na-eweta oge ememme na-esi anwụde. About 5 esi anwụde na 25 ofu paylines Mardi Gras Ime Anwansi jupụtara celebration mmụọ na ụgwọ ọrụ. Ihe ngosi bu ihe zuru ezu na isiokwu. Enwere Kaadị Suut dị ka akara ala dị ala t 4 merry Mardi Gras Carnival Women dị ka akara ngosi dị elu. Anụ bụ Joker Mask t even egwuregwu egwuregwu bụ gbasasịa. Anyanwụ nọchiri anya akara ndị ọzọ niile belụsọ akara Ikposa. Mgbe akara ngosi 4, 3, ma ọ bụ 5 pụtara, Egwuregwu 10, 15, ma ọ bụ 20 na-akpali.
IC Wins bụ igwe oghere na-enwekarị volatility. Na 6 × 4 laps, ọ na-enye ụzọ 4096 iji merie ma gụnye atụmatụ ndị dị mkpa, gbasasịa, regharịa ya na ndị un – eme ọtụtụ ihe, na mmeri un – ekwe nkwa, yana free spins Id multipliers ọtụtụ. N’elu ebe a na-eje ozi dika oke ohia nke snow kpuchiri otutu akara akara di elu. Ihe nnọchianya ndị a bụ agụ owuru, anụ ọhịa bea, anụ ọhịa wolf, t otu nwoke nwere uwe aji. Akara achụsasị bụ akara ngosi nke IC Wins ma ọ pụtaghị na eriri 1. 3 ma ọ bụ karịa gbasasịa na-akpalite Free Games. Ihe ohia akara bu oku oku ma o bu dighikwa na nke oma 1. Ọ na edochi akara ndị ọzọ niile belụsọ gbasasịa. Ihe omuma ohia mejuputara nchikota mmeri mgbe o dochie akara ndi gbara ya nso.
N’elu oghere a, akara zodiac ndị China niile na-egosi, dị ka Oke, Ox, Tiger, Rabbit, Dragọn, Agwọ, enyịnya, Ewu, Enwe, Ọkpa, Nkịta na ihe ndị a bụ akara mgbe niile. Naanị Ezi na-agbakọ akara akara anụ ọhịa na-acha uhie uhie t 2 t 4 t ndị nnọchi maka akara niile ma e wezụga ikposa. Pig ọ bụla na-agbata ihe nrite mgbe ọ pụtara na mmeri na egwuregwu nkịtị. Ọ nwere akara 5, 243 ụzọ niile na-akwụ ụgwọ paylines ebe akara niile na-akwụ ụgwọ n’aka ekpe gaa n’aka nri. Ihe akara akara bụ Ying Yang nke na-ebute atụmatụ Egwuregwu Free. A na-enye 8 egwuregwu efu n’efu mgbe 3 ma ọ bụ karịa gbasasịa pụtara na n’oge egwuregwu na-akwụghị ụgwọ Ying Yang na Wilds gbakwunyere. Onye ọ bụla Pig Wild ga-akwụ ụgwọ okpukpu atọ website Id egwuregwu efu 8n’ihu.